Amakilasi angu-15 aphezulu e-Pottery | Kumahhala & Kuyakhokhelwa 2022
I-2022 International and Local Scholarship | Ukufunda Kwamanye Amathuba | Izibonelelo Zemfundo Nezikhwama |
Amakilasi angu-15 aphezulu e-Pottery | Mahhala & Ikhokhelwa
Kwangathi 21, 2022 Daniel Okeke
Ake ucabange ubumba inkomishi, itiye/ikhofi lakho ngokuphelele, noma ubumbela owakwakho lelo threyi, cabanga ngobumnyama obuzovusa ubuso bakho lapho edla kulelo puleti olibumbile. Yilokho kanye amakilasi obumba aku-inthanethi angakusiza ukuthi uzuze, futhi awudingi ukuphuma ngaphandle kwekhaya lakho ukuze uqale ukubumba.
Ukufaneleka kwamakilasi ezitsha zobumba eziku-inthanethi kuzokukwenza ukhule usuka ekubeni nokungabi nalo ulwazi lwezitsha zobumba uye ekubeni uMbumbi osezingeni lomhlaba. Yebo, ngiqonde wonke amagama engiwashilo ngoba ngibonile futhi ngizwile abafundi abakhule kusukela kwabaqalayo ukuya kubabumbi abachwepheshile ngokulandela imiyalo eku-inthanethi.
Uma ungumama wekhaya, leli kungaba yithuba lokwenza okuthile okujabulisayo futhi okungathuthukisa ubuhlakani bakho. Futhi, zikhona imisebenzi engathathwa ngumama wekhaya nakuba bengenaso isipiliyoni.
Kuyamangaza ngempela ukuthi ababumbi baguqula kanjani ubumba olungabalulekile lube izitsha zobumba ezimangalisayo. NjengoMbumbi, lapho ubumba kakhulu yilapho ukhathazeka kakhulu ngemisebenzi yakho yobuciko. I-Pottery igcina ingqondo nenhliziyo yakho igxile emsebenzini wakho amahora athile, futhi ngeke ukhathazeke nganoma yini enye, ngisho nokucindezeleka kokuphila.
Ungabumba leyo vazi, futhi uyisebenzisela ukupholisa amanxeba omhlaba, umphumela uba muhle empilweni yakho, futhi ukwenza lokhu ngokunethezeka kwekhaya lakho. Ungathatha ngisho a umsebenzi we-low-stress ukuze ube nesikhathi sezinye izici ezibalulekile zokuphila.
Kukhona namanye amakilasi obuciko ongase uwathande, futhi ingxenye engcono kakhulu yawo wonke amahhala futhi ungawafunda ekunethezekeni kwekhaya lakho, ungabhalisa amakilasi okudweba, amakilasi wedizayini yangaphakathi, noma a ikilasi lomculo.
Ngaphambi kokuthi sikubonise uhlu lwamakilasi ezinto zobumba eziku-inthanethi, ake siqale siqonde ukuthi izitsha zobumba zisho ukuthini.
Ngingakwazi Yini Ukwenza I-Pottery Online?
Izinzuzo zamakilasi e-Pottery aku-inthanethi
Kuyavumelana nezimo ukuze Ubambe iqhaza
Ukufinyelela Komhlaba Wonke
Izidingo zokujoyina amakilasi e-Pottery aku-inthanethi
Amakilasi e-Pottery amahhala aku-inthanethi
1. Izitsha Zobumba Zabantu Abadala - Claire Louise McLauchlan
2. Izitsha Zobumba Zentsha - Claire Louise McLauchlan
3. Izitsha Zobumba Zezingane
4. Ukufunda Ukuphonsa nge-Hsin-Chuen Lin
5. Yenza Inkomishi Yobumba: I-Hand Building Pottery yabaqalayo
6. Izindlela Ezi-4 Ezivivinywe Isikhathi Sokwenza Ubumba Ngaphandle Kwesondo Lombumbi
7. Ungaliphonsa Kanjani Futhi Unqume Ipuleti Esondweni Lobumba - Ikilasi Lobumba Nobumba (Olimaphakathi)
8. Yenza Inkomishi Yebumba Lobumba Ngesibambo Esondo Lezibumbi - Izifundo Zokuqala Zobumba / Ze-Ceramics (Eziphakathi)
9. Uzenza Kanjani Izibambo Zobumba (Okuxutshiwe)
10. I-DIY: Funda Indlela Yokupenda AmaCeramics Nge-Lavender Motifs Enhle
Amakilasi e-Pottery akhokhelwayo aku-inthanethi
11. Amakilasi E-inthanethi Abaculi | I-Teachinart.com
12. Izitsha Zobumba Eziphonswe Ngesondo Zabaqalayo
13. I-Ceramics Ekhaya Kwabaqalayo
14. Isikole seCeramic
Amakilasi e-Pottery aku-inthanethi - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Ingabe umbumbi uwumsebenzi omuhle?
Ngiba kanjani umbumbi?
I-Pottery iyinqubo yokuthatha ubumba bese ulubumba ku-ceramic oyifunayo bese uluvumela ukuba lome bese uludubula lube yi-ceramic enhle. Ubumba luhlobo lwenhlabathi yemvelo eyenziwe ngamadwala anesimo sezulu.
Kunezinhlobo ezintathu zezitsha zobumba, yilezi;
Ubumba oluwubumba lwaluwuhlobo lokuqala lwezitsha zobumba futhi lwalusetshenziselwa ukwakha izitini abaseGibhithe, amaPheresiya, amaGreki, amaRomania, namanye amaShayina kwaze kwaba sekhulwini le-17. Kuyinto elula futhi eshesha kakhulu ukuxoshwa, kuthatha i-1,000 ° C kuya ku-1,150 ° C ukuyishisa kumbumbi.
Umbumbi owenziwe ngayo uvamise ukuba lukhuni kodwa uyaphuka futhi unezimbobo ezincane lapho uketshezi nomoya kungadlula khona, futhi ngeke kusetshenziselwe ukonga amanzi.
I-Stoneware yathuthukiswa kancane kancane ezinkulungwaneni ezi-5 zeminyaka edlule (eminyakeni engu-5,000 edlule), futhi iqhunyiswa phezulu kancane kunobumba lobumba. Ukushisa kwayo okuphezulu kuzungeze i-1,200 ° C futhi kwenza i-ceramic ikwazi ukuhlala isikhathi eside, futhi ingakwazi ukugcina amanzi.
I-Porcelain Clay okwamanje iwubumba olungcono kakhulu ongalusebenzisa ukubumba, futhi lwavela eShayina, kudala emuva cishe ngo-1600BC. Ingashiswa ukusuka cishe ku-1,200°C kuya ku-1,450°C okwenza umkhiqizo wokugcina ube nzima kakhulu futhi ucwebezele.
I-Porcelain Clay iyona iningi lalezi zigaba zobumba eziku-inthanethi ezizosebenzisa ukukufundisa. Uzothola namakilasi obumba lwe-Earthware kanye nobumba lwe-Stoneware.
Ukufunda ukwenza ibhodwe noma leyo-ceramic enhle kungase kube lula kunalokho ocabanga ngakho ngamakilasi obumba okwenziwa ku-inthanethi. Ngoba amakilasi asebenza ngokuya ngejubane lakho, ungakhetha ukumisa isikhashana bese udlala kabusha isigaba noma nini lapho uthanda.
Ngaphezu kwalokho, beza ngevidiyo ye-HD, okuzokwenza ukwazi ukubona kahle ukuthi abafundisi bakho benzani.
Kunezinzuzo eziningi zamakilasi ezitsha zobumba eziku-inthanethi, nazi ezinye zazo.
Ungakhetha ukufunda ngesikhathi sakho, awudingi ukuya kunoma yisiphi isakhiwo somzimba esiyisibopho noma ulinde umfundisi ukuthi akufundise ngokweshejuli yakhe (okungekubi nhlobo). Ungathamela noma yimaphi amakilasi obumba akwi-inthanethi nganoma yisiphi isikhathi ofuna ngaso (vele uqinisekise ukuthi uyazikhuza ukuze ulandele ngokwenkolo ngamamojula).
Ungadlula ezintweni zokufunda, futhi wenze nezabelo zakho ngokuthanda kwakho, futhi uba nelungelo lokuxoxa nabanye abafundi bakwamanye amazwe.
Ungakhetha ukuletha abangani bakho ekhaya lakho futhi nonke ningabamba iqhaza kulawa makilasi ezinto zobumba eziku-inthanethi, ningakhetha ukukwenza ekhishini lakho, nigqoke izingubo zokulala. Ungakhetha ukuza ekilasini ngokushesha ngemva kokuvuka noma ngemva kokwethulwa, noma ngisho nangaphambi kokuyolala.
Kodwa-ke, qiniseka ukuthi unesikhathi esinqunyiwe sokuza njalo ekilasini ngoba ukuguquguquka nakho kuza nenkinga yako, okuhlanganisa ukungahambisani nokuyeka ngesikhathi esithile.
Lezi zigaba zobumba eziku-inthanethi zisho ukuthi ungaba kunoma yiliphi izwe futhi ubambe iqhaza esifundweni kwelinye izwe.
Kunezinto ezimbalwa ozozidinga ukuze ubambe iqhaza kulawa makilasi ezinto zobumba eziku-inthanethi, ahlanganisa;
I-laptop noma i-smartphone enhle
Isondo lombumbi (uma uhlose ukubamba iqhaza esigabeni samasondo ombumbi, kodwa hhayi impoqo).
Isiqephu esincane sesikhumba se-chamois.
Umbambo wokhuni wokwenza amapuleti
Manje ake sibone amanye amakilasi ezitsha zobumba eziku-inthanethi, sizoqala siklelise amakilasi amahhala, bese siklelisa amakilasi akhokhelwayo.
Leli elinye lamakilasi angcono kakhulu okubumba izitsha eziku-inthanethi zabantu abadala, yikilasi le-YouTube lapho umfundisi wakho, uClaire Louise ezokukhombisa ukuthi ungayenza kanjani into ephathekayo futhi. ilungele ukusetshenziswa izitsha zobumba. Ungakhetha ukuzisebenzisa ekhaya lakho, engadini yehhovisi lakho noma uzithengise.
Awudingi okokusebenza okuningi kuleli klasi, futhi uzobe usebenzisa isandla sakho ukubumba ubumba lwakho lube umsebenzi wobuciko obuhle, okusho ukuthi, ngeke usebenzise isondo ukubumba kuleli klasi. Uzofunda ukubumba ibhodi likashizi, isethi yesitsha sebhotela, kanye nethegi yesitayela saseMoroccan yokupheka. Ngaphezu kwalokho, uClaire uzokufundisa ngokubonakalayo ukwenza amabhokisi obucwebe, amabhodlela okuhlobisa, nebhafu lezinyoni ezilenga odongeni engadini yakho.
Ividiyo iqala ngokukubonisa indlela yokubumba izinto ezilula njengebhodi lokunquma, uqweqwe lukashizi, nesitsha sebhotela.
Futhi iyaqhubeka ikutshela ezinye zezinto ozozidinga ekilasini. njenge-Mat (impahla yohlobo lukaseyili ingcono) noma ibhodi elikhulu lamapulangwe, iphinikhodi, nephinifa (akudingekile). Wakubonisa nephepha lapho aklama khona ibhodi lokunquma ayehlose ukulibumba.
Njengoba ubuqagele, leli ikilasi lezitsha zobumba elivela kumfundisi ofanayo elilungiselelwe intsha ngokukhethekile. Ingenye yezifundo ezingcono kakhulu zobumba eziku-inthanethi ongazithola ku-YouTube zentsha ngoba ihlukaniswe ngamakilasi amasonto onke anamavidiyo angaphezu kwemizuzu engu-15 ekilasini ngalinye.
Ikilasi liqala ngokukufundisa indlela yokwenza indlu yezinganekwane ngamabhodwe athize futhi uzosebenzisa indlela yokwakha ngezandla kuleli klasi futhi. Uzoqala ngokukubonisa ukuthi ulolonge ubumba lwakho njengebhola leqhwa ngokulimbambatha ngempela.
Leli elinye ikilasi le-YouTube, kodwa le vidiyo yenzelwe izingane. Ingelinye lamakilasi ezitsha zobumba eziku-inthanethi ezinobude bemizuzu engama-49.
Umfundisi uzobe efundisa izingane zakho indlela yokubumba isidleke senyoni ngofulawa, usawoti, amanzi afudumele, amafutha emifino, iphini lokugoqa, isitsha esincane nesiphakathi, iphephandaba, ummese ongabukhali, ithreyi lokubhaka, ipensela, umbusi. Umfundisi kumnandi kakhulu ukumlalela, futhi ngikholwa ukuthi izingane zakho zizothanda ukufunda kuye.
Lokhu kumnandi isinyathelo ngesinyathelo, ngaphezu kwe-100 ikilasi le-YouTube elibumbayo, lokho kungakufundisa okuningi mayelana nokubumba, kodwa akusikho okwabaqalayo. Umfundisi wakho, u-Hsin-Chuen, uzobe esebenzisa isondo lombumbi kuwo wonke amakilasi, futhi uzoqala ngokuthi "ukuphonsa ithanga lobumba esondweni lobumba."
Uhlangothi oluhle lwalo ukuthi, maningi amakilasi angakusiza ukuba ube umbumbi ochwepheshile. Uhlangothi olubi lwaleli klasi indawo enomsindo futhi amavidiyo ahlakazekile, ngakho-ke kufanele uskrolele phansi ukuze uthole ingxenye yokuqala yevidiyo.
Leli elinye lamakilasi obumba amahhala aku-inthanethi ashicilelwe kwa-SkillShare. Umfundisi wakho, uMia Moss, obelokhu enza ubumba iminyaka engu-10 futhi uvule istudiyo eBerlin uzokukhombisa ukuthi ungabumba kanjani ubumba lube inkomishi enkulu.
Uzobe esebenzisa i ukwakha ikhoyili indlela yokukufundisa kuleli klasi, futhi kulula kakhulu ukuyiqonda ngoba uzosebenzisa izandla zakho kanye nemishini embalwa yasekhaya. Ikilasi elabasaqalayo nhlobo, awudingi ukuzizwisa ukuze ujoyine.
Okubaluleke kakhulu, u-74% wabafundi uvotele lesi sifundo kweqe abakulindele. Ngakho-ke uma usaqala, khona-ke lesi kungaba yikhosi oyidingayo ukuze uqale uhambo lwakho lokubumba izitsha.
Kuleli klasi, umfundisi wakho, uManda Marathe, umdwebi onekhono, nomqophi wezithombe, uzobe ekuhola kumasu angu-4 okubumba ngezandla zakho, futhi uzosebenzisa lawa masu ukuze udale i-ceramic enhle. Lesi ngesinye sezifundo zobumba eziku-inthanethi lapho uzodinga khona amathuluzi obumba alula, ngakho-ke asikho isidingo sokuthenga izisetshenziswa ezibizayo zaleli klasi.
Amavidiyo enziwa nge-HD ukuze ukwazi ukubona kahle ukuthi umfundisi wakho wenzani. Futhi ngeyabaqalayo.
Kulesi sifundo esifushane semizuzu engama-21 esifushane, uzofunda ukuthi ungabeka kanjani ipuleti lakho phakathi nendawo, usike ipuleti lakho lisuke esondweni, nokuthi ulinquma kanjani ipuleti lakho ukuze ulenze libe sezingeni eliphezulu.
Lesi esinye isifundo semizuzu engama-26 esiPhakathi esizokufundisa ukwenza inkomishi, futhi isifundo sihlukaniswe izigaba ezi-3. Uzokufundisa ukwenza umzimba wendebe esigabeni sokuqala, bese esigabeni sesibili, uzokufundisa ukwenza isibambo. Bese esigabeni sokugcina, uzofunda ukuxhuma isibambo emzimbeni bese wenza umsebenzi wakho wokugcina.
Ukwazi ukuthi lungakanani ubumba oludingayo ngenkathi wenza isibambo sakho kubaluleke kakhulu, futhi yilokho lesi sigaba esizoqala ngakho.
Lesi ngesinye sezifundo zobumba eziku-inthanethi ezizokukhombisa ukuthi wazi kanjani isibambo esilungile sokugingqa isibambo esicijile. Ungasidonsa kanjani isibambo esine-tapered nokuthi yiziphi izindawo zokusebenza ezizosebenza kahle kulelisu.
Lesi ngesinye sezifundo zobumba eziku-inthanethi ezawo wonke umuntu ngoba uhlala udinga lowo mklamo omuhle ekomini yakho, noma ujeke noma nini lapho uqeda ukubumba. Umfundisi wakho uzobe ekubonisa indlela yokudweba i-lavender kuma-ceramics, futhi uhlobise izinto ezahlukene ze-ceramic.
Umfundisi wakho uzoqala ngokudweba izinkomishi zetiye/zekhofi, abese eqhubekela phambili ekupendeni amapuleti nezitsha, bese ekugcineni azoqeda ngamanye amathiphu okwengeza amanye amaphethini nemibala.
Leli elinye lamakilasi akhokhelwayo ezitsha zobumba aku-inthanethi anezinkulungwane zabafundi abavela emazweni angama-42. Imihlangano yabo yokucobelelana ngolwazi ihlale ikukhuthaza ukuthi ubuze imibuzo uze uqonde impendulo, futhi amavidiyo abo ahlala etholakala ukuze ukwazi ukuwavakashela kabusha noma nini lapho uthanda khona.
U-Antoinette Badenhorst, umsunguli we- teachinginart.com useneminyaka engaphezu kwengu-40 ebumba ngobumba bobumba, futhi kwenye yezinkundla zokucobelelana ngolwazi, uzokufundisa ukuthi ungalusebenzisa kanjani kahle ubumba lwe-porcelain. Kungamaviki angu-6 e-course futhi uzokuthatha ngesandla akufundise isinyathelo ngemva kwesinye.
Uzosebenzisa kokubili indlela yokwakha ngesandla kanye nesondo lombumbi, futhi yamukela ababumbi banoma yiliphi izinga, noma ngabe ungumuntu osaqalayo noma manje ungumbumbi ochwepheshile.
Ngaphezu kwalokho, kunezinye izinkundla zokucobelelana ngolwazi ongakhetha ukuzibhalisela ezifana nalezi;
Izitsha zobumba zokwakha ngezandla zabaqalayo
Ukuncinza ama-teapot kwabaqalayo
I-handbuilding porcelain dinnerware
Amathiphu e-porcelain obumba lwamasondo
Thatha ukujikijela kwamasondo uye ezingeni elilandelayo
Isethi ye-Teapot ebhekene
Amabhodwe etiye ajikijelwa ngamasondo
I-glazing yenziwe lula
Ukugqama noRon Roy
Lesi ngesinye sezifundo ezingcono kakhulu zobumba eziku-inthanethi ezishicilelwe ku-Udemy. Eqinisweni, i-a okuhamba phambili Yiqiniso, enezinkanyezi ezingu-4.9 ezilinganiselwe ngabafundi abangu-131.
Kunamavidiyo esinyathelo ngesinyathelo angaphezu kuka-80 azokuqondisa ekubumbeni ubumba ezitsheni zobumba usebenzisa isondo lombumbi. Ikilasi liqala ngokukwethula ngezinto zobumba namathuluzi amasondo obumba, bese liqhubekela ekuphonseni okuyisisekelo, izinkomishi, izitsha, amafomu avulekile, njll.
Njengoba ikilasi liqhubeka, uzonikezwa izabelo, futhi ekupheleni kwesifundo sakho, uzonikezwa isitifiketi sokuqeda.
Lesi ngesinye sezifundo zobumba eziku-inthanethi okuyi-a okuhamba phambili ngezibuyekezo ezinhle ezingu-98% ezivela kubafundi abangaphezu kuka-1.4k ezishicilelwe i-DOMÊSTIKA. Umfundisi wakho, u-Paula Casella uthweswe iziqu kwezobuciko obuhle futhi wasungula i-Bambucito Cerámica Orgánica.
Useneminyaka engaphezu kwengu-15 ebhizinisini lezitsha zobumba futhi ngolwazi lwakhe olubanzi, uzobe ezokuthatha kulesi sifundo se-3h 51m. Kunezifundo ezingama-21 futhi abafundi abangaphezu kuka-54k asebebhalisile.
Lesi sifundo sabaqalayo sizokufundisa indlela yokumodela kanye nokucwebezelisa izitsha zobumba kusukela ekuqaleni usuka ekhaya lakho. Uzofunda umehluko ocashile phakathi kobumba olubhakwa kuhhavini nobumba olomiswe ngomoya, uzofunda nokubunjwa kukakhonkolo ongakusebenzisa futhi ukuze udale izingcezu eziningi kumaphrojekthi azayo.
Okubaluleke kakhulu, uma usuqedile ngezifundo, uzonikezwa isitifiketi sokuqeda.
Leli ngelinye lamakilasi ezitsha zobumba eziku-inthanethi ezinezinkundla zokucobelelana ngolwazi eziyi-140, ungakhetha ukukhetha indawo yokusebenzela ngama-alfabhethi, esanda kufakwa, noma ngokwezigaba. Futhi, ungakhetha ukujoyina iqembu labo elilodwa noma ngaphezulu kwamahhala angu-15 wezitsha zobumba, lapho ungathola khona izibuyekezo, uxhumeke nabantu, ufunde, futhi wabelane ngolwazi lwakho.
I-ClayShare ingelinye lamakilasi ezibumba eziku-inthanethi ezinikeza isivivinyo samahhala sezinsuku ezingu-7, futhi uma ubhalisa kumakilasi abo anyanga zonke ka-$22.99, uzokwazi ukufinyelela kumakhulu amakilasi obude obugcwele bezitsha zobumba namanye amavidiyo obuciko. Uzokwazi nokufinyelela ekusakazeni bukhoma kwamasonto onke kuzo zonke izinhlelo zabo zokusebenza, i-Facebook ne-YouTube kanye nokunye okunikezwayo okuningi lapho ubhalisa.
Nokho, ungakhetha ukuthenga amavidiyo abo ngawodwana.
Kungumsebenzi omuhle ngoba umbumbi ojwayelekile angahola u-$20 ngehora
Sinikeze amakilasi ayi-15 ongaya kuwo futhi ube umbumbi ochwepheshile ngesikhathi esifushane.
Izifundo Zamahhala Zokupenda Zamahhala Eziku-inthanethi
Izifundo Ezingcono Kakhulu Zamahhala Eziku-inthanethi ze-Microsoft ezinezitifiketi
Umenzi Wemibuzo Wamahhala eku-inthanethi
Isifundo samahhala samarobhothi esiku-inthanethi sabaqalayo
Izifundo Zamahhala Eziku-inthanethi Zokunakekelwa Kwezingane ezinezitifiketi
Top Fun Online Games for Abashadile
Umdali wokuqukethwe at Study Abroad Nations | Bheka Ezinye Izihloko Zami
UDaniel ungumdali wokuqukethwe oneminyaka engaphezu kwengu-2 yesipiliyoni sokucwaninga nokudala okuqukethwe ukusiza abafundi abafuna ukufunda phesheya kanye nalabo abafuna ukuthatha izifundo ze-inthanethi zokuzithuthukisa, ukutholwa kwamakhono noma iziqu. U-Dan ujoyine i-SAN ngo-2021 njengomdali wokuqukethwe okusekelwe ocwaningweni.
Uthanda ukuhlangana nabantu abasha nokuthuthukisa ubudlelwano obusha.
Ungasithola Kanjani Iziqu Zesayensi Ye-Forensic
Ungayithola Kanjani I-Harvard MBA Scholarship
23 Scholarship for MBA Abroad
I-Scholarship ephezulu eyi-15 e-USA ye-MBA
Free Izifundo Funda i-Skill Online izifundo ze-intanethi funda ku-inthanethi
Post Previous:I-17 Scholarships e-USA Yabafundi base-Afrika
Post Next:Amakolishi Omphakathi ayi-10 eFlorida
Zama Insizakalo yokubhala i-eseyi ngu-Writix ukuthola usizo lochwepheshe base-UK.
Joyina Amaqembu Ethu Amasha Omhlaba WamaScholarship Lapha
Thola imininingwane yakamuva nganoma yiluphi uhlelo oluqhubekayo lokufundela bese uxoxa nabafundi bamazwe aphesheya ngezifundo ezivela kuwo wonke umhlaba.
Joyina okwethu I-International Scholarship Telegram Group (Ingxoxo inikwe amandla)
Joyina uZethu I-International Scholarship WhatsApp Group 2 (Ingxoxo ayinikiwe amandla)
Follow us on Twitter ukubona ama-tweets ethu wakamuva ngamathuba nezifundo zaphesheya.